Comgwé ojii Kọmputa: Ọghọm: Akụkụ ọzọ nke mkpụrụ ego! | Site na Linux
Cloudgwé ojii Kọmputa: Ọghọm - Akụkụ nke ọzọ nke mkpụrụ ego!
N’isiokwu bu nke a n’isiokwu a, akpọrọ «XaaS: Cloudgwé ojii Kọmputa - Ihe niile dịka Ọrụ«, Nke gosipụtara uru, uru, uru na njirimara ndị ọzọ dị ugbu a na ọdịnihu nke Cloud Computing, a gosipụtara na n'agbanyeghị ihe ọ bụla nke a yiri ka ọ bụ ụzọ maka azụmaahịa azụmaahịa na azụmaahịa ugbu a.
Ma, emetụ ha aka ma ọ bụ mie emie akụkụ na-adịghị mma ma ọ bụ akụkụ adịghị mma nke teknụzụ kwuru maka nwa amaala obodo, ọha mmadụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị na obere ịbịakwute ya site na echiche nke nkà ihe ọmụma nke Free Software na GNU / Linux. Yabụ na post a, anyị ga-eleba anya n'akụkụ ndị a iji mee ka ozi ziri ezi gbasara teknụzụ.
Ndị ọrụ na ndị ahịa nke ngwa na ọrụ dabere na igwe ojii na-akọwapụta ihe dị mkpa ka ekwenye nnweta nnweta na ịnweta ha, na ndị na-enye ha na-etinye nchebe kwesịrị ekwesị yana omume nzuzo na teknụzụ iji belata ihe egwu na ọdịda nke teknụzụ dị otú ahụ na-eche ihu dịka ọ dabere kpam kpam n'igwe ojii.
Ha choro nkwekorita a ka ha nwee ike ibuputa mkpebi ha banyere ahia siri ike, nke oma ma dozie ya na onodu oru. Nke a pụtara na ndị isi egwuregwu na teknụzụ a, ya bụ, ndị na-enye ha, na-arịọkarị maka nyocha.
Ma na mgbakwunye na enwere ike ọdịda, ihe egwu ma ọ bụ ọgụ nke kwuru na teknụzụ nwere ike ihu, ọ bụkwa eziokwu na a ga-ahụ ya ma ọ bụ nkà ihe ọmụma ya megidere ihe ọtụtụ mmadụ nwere ike inwe ekele maka ya ma ọ bụ were dịka anya nke uche dị ka nnwere onwe ha ma ọ bụ mkpokọta ha ma ọ bụ nnwere onwe ha.
1.1 Ihe ize ndụ nchebe
1.1.1 Ifunanya nke ochichi
1.1.3 Mkpuchi ihe
1.1.4 Nkwado nnabata
1.1.5 Management interface ikwere
1.1.6 Nchedo data
1.1.7 Nhichapụ data ezughi oke ma ọ bụ na-enweghị nchebe
1.1.8 Obi ọjọọ otu
1.2 Ihe egwu gbasara nnwere onwe
1.2.1 Free Software na Private Software
1.2.2 Ihe ngwanrọ na komputa kọmputa
Ihe ize ndụ nchebe
A na-eme ka ihe ize ndụ nchebe nke igwe ojii na-arụ ọrụ nke ọma na uru nchekwa dị iche iche nke ndị na-ere dị iche iche na-enye. Igwe igwe ojii, ya onwe ya, nwere ikike dị ukwuu iji melite nchekwa na iguzogide ọdịda ma ọ bụ ọgụ. Agbanyeghị, n'etiti ihe egwu kachasị dị na nchekwa nke nwere ike ịme na igwe ojii, bụ:
Ifunanya nke ochichi
Enwere ike imetụta ihe owuwu igwe ojii mgbe onye ahịa ma ọ bụ onye ọrụ nyere njikwa nke ụfọdụ teknụzụ nwere ike imetụta nchekwa nke otu onye na-eweta ya na igwe ojii. Ma ọ bụ na nke ọzọ mgbe ndokwa nke ọrụ igwe ojii ahụ anaghị ekpuchi akụkụ nchekwa, nke nwere ike ịmepụta "oghere" n'ihe banyere nchekwa nchekwa.
Onye ahịa ma ọ bụ onye ọrụ nwere ike jikọta ya na igwe ojii na-eweta ya, ma gbochie ya ịlaghachi, nke ahụ bụ, na gburugburu ebe obibi (mpaghara) IT Environment, ma ọ bụrụ na nkwekọrịta ndị ahụ ekweghị nkwa na akụrụngwa, usoro, usoro data ahaziri ahazi ma ọ bụ ihu ọrụ na-ekwe nkwa ọrụ, ngwa yana data. Site na ndabara, mbugharị nke onye ahịa site n'aka onye na-eweta ọrụ na onye ọzọ ma ọ bụ mbugharị nke data na ọrụ ma ọ bụ n'ime, usoro nke dị oke mgbagwoju anya na ọ gaghị ekwe omume.
Mmehie ma ọ bụ ọgụ megide usoro nke kewara ichekwa nchekwa, ebe nchekwa, ụzọ esemokwu ma ọ bụ nersonomi nke onye na-eweta ọrụ (Guest Hopping Attack) anaghị adịkarị oke n'ihi ọkwa nke mgbagwoju anya, ma ihe isi ike anaghị eme ka ha ghara ịrụ ọrụ.
Ọtụtụ oge n'ihi etu ụdị teknụzụ a ga-esi dị oke ọnụ ma ọ bụ n'oge a, Ndị na-ebubata otu ihe na-anwa iwelata mmefu na usoro nchịkwa ma ọ bụ usoro iwu nke mpaghara ahụ, nke n'ikpeazụ nwere ike iyi usoro nke Mbugharị na igwe ojii ma ọ bụ arụmọrụ ugbua n'ịntanetị. Ọnọdụ ndị ọzọ nwere ike ịbụ na iji akụrụngwa ejiri n'ọrụ igwe ojii enweghị ike iru ọkwa ụfọdụ nke nnabata ekwere ndị ọrụ na ndị ahịa.
Management interface ikwere
Ndị na-ahụ maka njikwa ndị ahịa nke ndị na-eweta ígwé ojii na-ejikarị thentanetị enweta, gini nwere ike idi ihe ize ndụ nchebe ka elu, tumadi mgbe ha jikọtara ya na teknụzụ ịnweta ụzọ dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ atumatu, na mgbakwunye na ụdị nke ọma nke ihe nchọgharị weebụ eji.
Mgbe ụfọdụ maka onye ọrụ ma ọ bụ onye ahịa nke igwe ojii na-eweta kọmpụta igwe iji chọpụta nke ọma na onye na-eweta ọrụ na-emetụta ma ọ bụ na-eme ihe ziri ezi ma ọ bụ ihe ịga nke ọma njikwa njikwa data, ọ na-esitụrụ ike, ya mere, ọ na-esiri gị ike ijide n'aka na ejikwa data ahụ dịka iwu si dị. Na nke a, ha na-ejikarị dozie maka akụkọ dị mfe banyere omume njikwa data ha ma ọ bụ nchịkọta asambodo na ọrụ ha na mpaghara nhazi data na nchekwa, yana na njikwa data ha na-enweta.
Nhichapụ data ezughi oke ma ọ bụ na-enweghị nchebe
Ọzọ ikpe yiri nke gara aga (Data Protection), bụ mgbe onye ọrụ ma ọ bụ onye ahịa nke igwe ojii na-eweta kọmpụta enweghị ezigbo ohere iji gosipụta nke ọma otu ihe ahụ na-ewepu data ọ bụla achọrọ kpamkpam, ebe ọ bụ na oge ụfọdụ usoro nhazi anaghị ewepu data ahụ kpamkpam. Ya mere, mkpochapu ma ọ bụ nhichapụ data ọ bụla agaghị ekwe omume ma ọ bụ na-adịghị mma, site na onye ahịa na onye na-eweta ya, maka ebumnuche dị iche iche.
Obi ọjọọ otu
Mmebi nke ndị otu obi ọjọọ mebiri bụ obere, mana mgbe ọ mere, ọ na-emebi nke ukwuu.
Ihe egwu gbasara nnwere onwe
Iji mee nke a, ọ dị mma ihota okwu ndị a sitere na Richard Stallman:
Na ịntanetị, sọftụwia nwere ikike abụghị naanị ụzọ isi tufuo nnwere onwe gị. Ọrụ mgbanwe software (SaaSS), nke ahụ bụ ịsị, "bụrụ onye osote "Software Dochie" bụ ụzọ ọzọ nke ikewapụ kọmputa gị.
Free Software na Private Software
Dị ka anyị hụworo n'oge ndị ọzọ, Ebe ọ bụ na ụwa nke ngwanrọ mmepe malitere, na ihe n'otu oge Free na Open Source Software (SL / CA) esonyere na Private na Emechiela Source Software (SP / CC). Nke ikpeazụ a na-ebute ụzọ mgbe niile n'ihe gbasara ihe a na-akọwakarị dị ka ihe iyi egwu na-achịkwa njikwa anyị na kọmputa anyị na ozi nkeonwe na nke onwe.
Ihe iyi egwu a na-egosipụtakarị onwe ya site na iwebata atụmatụ ọjọọ ma ọ bụ arụmọrụ achọghị.dị ka spyware, ọnụ ụzọ azụ na njikwa mmachi dijitalụ (DRM). Nke na-ekpughekarị nzuzo na nchebe anyị, ma belata nnwere onwe na nnwere onwe anyị.
Ya mere, mmepe na ojiji nke SL / CA abụrụla ụzọ dị irè iji gbochie SP / CC. N'ihi nnwere onwe anọ (4) dị mkpa, nke mmadụ niile maara nke ọma. Nnwere onwe nke na-ekwe nkwa na anyị, ndị ọrụ, na-achịkwa ihe eji kọmputa anyị na ourntanetị eme.
Ihe ngwanrọ na komputa kọmputa
Otú ọ dị, ntoputa nke ohuru 'Cloud Computing' na enye ezi uzo ohuru na ndị niile (Ndị ọrụ, ndị ahịa, ụmụ amaala na ndị otu, ọha na eze na nzuzo), hapụ njikwa nke ọrụ anyị, maka nnwere onwe anyị (echere) na ọbụna nkasi obi na mmepe.
Na nchịkọta, n'akụkụ a enwere ike ikwu ihe ndị a Mmetụta ndị a na-achọghị na Cloud Computing (ma ọ bụ Cloud Cloud / SaaS) na Proprietary Software:
Ha na-ebute nsonaazụ na-emerụ ahụ yiri nke ahụ, mana usoro dị iche iche. Site na ngwanrọ nke akụrụngwa, usoro ahụ bụ na ị nwere ma jiri otu nnomi siri ike na / ma ọ bụ megidere iwu iji gbanwee. Site na SaaS usoro a bụ na ịnweghị akwụkwọ nke ị na-arụ ọrụ kọmputa gị.
Ya mere, site na enweghị ike ịgbanwe, anyị enweghị ike ịma ihe ọ na-eme na data anyị na ozi nkeonwe anyị.
Dika isi ihe a sara mbara nke oma, anyi na agba gi ka iguta ya ederede zuru ezu site n'aka Richard Stallman banyere ya.
Ihe egwu niile edepụtara n'elu egosighi otu usoro nkatọKama nke ahụ, ha na-akọwapụta ihe egwu dị ugbu a nke nwere ike ịdị n'ime igwe mgbakọ igwe ojii.
A ga-atụle ihe egwu dị n'iji igwe ojii kọwaa ihe ọghọm sitere na idobe azịza ọdịnala, dị ka ụdị Infrastructure dị n'ime ma ọ bụ nke mpaghara. Na agbanyeghi na n’achụmnta ego, n ’ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ nke azụmahịa, uru dị na ya na-abụkarị ọtụtụ, ndapụta nke ihe egwu dị nfe nke ndị ahụ e kwuru n’elu nwere ike ibute ọdịda nke azụmaahịa niile, ma ọ bụ mebie aha ya dị oke njọ, ma ọ bụ na enweghị nsonaazụ iwu.
Ma ọ bụ ezie na ọ bụghị na njedebe ikpeazụ, ọghọm dị ukwuu na nnwere onwe na nnwere onwe, ọkachasị mgbe etinyere ya na obere ndị ọrụ dịka ndị mmadụ n’otu n’otu, obodo, mmegharị ma ọ bụ ọha mmadụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Cloudgwé ojii Kọmputa: Ọghọm - Akụkụ nke ọzọ nke mkpụrụ ego!
Zaghachi Beatriz Aurora Pinzón
Ihe kpatara iji ghara iji Microsoft Windows
Apache Software Foundation kwupụtara ọkwa GitHub